Sms Jaceyl ah - Baro sida loo qoro Sms Jaceyl ah
SMS Jaceyl ah - Sidee loo qoraa SMS Jaceyl ah??
Hadaba u qor sidaan..
Run ahaantii Waxaan Ogahay inuusan jirin Qof Qalbigayga u taabtay, sida aad Adigu u taabatay..
Waxaan Qirayaa inaad tahay, Qofka i baray Jaceylka, Dulqaadka, Naxriista iyo Farxadda.
Ogoow Noloshu Farxad maleh markaan ku waayo Maalin qura, oo waxaan dib ugu noqdaa oo aan Naftu ku sasabaa Akhrinta Farriimihii hore ee ina dhex maray si aan uga helo Farxad oo aan ugu Nafiso, una dareemo Adiga oo ila jooga.
Waan ku jeclahay, waxaadna tahay Qalbigeyga Qofka ugu Wanaagsan ee Qancin kara, waan kuu riyaaqaa, Riyadeyda qofka Rumeyn karana waa Adiga, waan kugu Rajo weynahay, Qofka keliya oo ay Naftu tabeysana waa Adiga.
Waxaa tahay farxadeyda, waxaa tahay indhaheygu aragood, waxaa tahay mustaqbalkeyga. Aad baan kuu jecelahay nolosheyda❤️